Daryeelka Tababarka-Nafaqada - GO! SPECTRUM SCHOOL (FULL-TIME // BSO // CAMPUS RUGGEVELD)
TILMAAMKA HEERKA IYO JAWAABSAN TAHAY
Wax idiin sameeyo?
Haddaba waa maxay?
spectrum School > koorsooyinka our > Zorg > Nursing-Nutrition
tababarka Barashada + Xirfadaha (BSO) ee GO! Spectrumschool, Ruggeveld Campus
Daryeelka tababarka BSO
De Daryeelka Waxbarashada BSO ee buuxa - Nafaqada wuxuu kuu diyaariyaa xirfado ku saabsan daryeelka ilmaha, waayeelka iyo daryeelka guriga. Waa mid tababar aad uwanaagsan oo leh maaddooyin guud oo yar. Waxaad baraneysaa sida ugu wanaagsan ee waxtarka u leh daryeelka qofka qaata (caruurta iyo waayeelka labadaba) iyo baahidooda gaarka ah. Tani waxay la socotaa Layli.
ah 2e degree Daryeel - Nafaqo waxaad wax badan ka baraneysaa nadaafadda: diyaarinta cunto caafimaad leh, isku dheeli tiran oo fudud; ilaalinta guriga, dharka iyo dhar kale. Waxaad baraneysaa xiriirka bulshada, nafaqada caafimaadka leh iyo helitaanka aqoon aasaasi ah oo ku saabsan daryeelka caafimaadka. Waa inaad diyaar u tahay inaad daryeesho dadka haddii ay yihiin da 'yar ama duqoobay, rag ama dumar .... Muhiimadda halkan waxay ku jirtaa daryeelka iscaawinta, daryeelka aan rasmiga aheyn iyo daryeelka ee gudaha deegaanka.
ah 3e Heerka Daryeelka waxaad baraneysaa sida loola macaamilo naftaada, asxaabtaada iyo dadka u baahan daryeel xaalada maalmeed. Waxaad tababar ku sameyneysaa fiirinta iyo warbixinta, la shaqeynta daryeelayaasha kale. Waxaad baran doontaa gargaarka degdegga ah, cunto caafimaad leh iyo saldhigga barashada cuntada. Waxaad baraneysaa sida loo diyaariyo cunugaaga cuntada iyo cuntada, taas oo ah mid caafimaad leh oo dhadhan fiican isla wakhtigaas. Waxaa laguugu soo bandhigayaa sharciga bulshada, xuquuqdaada iyo waajibaadkaada, sharciga caafimaadka ...
Inta lagu jiro Layli waxaad heleysaa fursad balaadhan oo ah waxa aad taqaanid oo aad ku codsan karto ficil ahaan. Waxaad kaloo dhadhan kartaa xaalada dhabta ah ee shaqada ee hay'ad ka tirsan qaybta daryeelka caafimaadka.
Waxaad ka helaan inay la shaqeeya dadka
Waxaad xiran sida daryeelka dadka kale
Waxaad si fiican u shaqayn karin
Ma jeceshahay inaad la shaqeyso dadka? Miyaad leedahay dareen masuuliyad ah? Ma waxaad xiiseyneysaa nolol maalmeedka dadka caafimaadka qaba iyo kuwa buka? Ma wada shaqeyn kartaa si fiican, miyaad la tacaali kartaa saacadaha shaqada ee dabacsan?
Markaa jihadaasi waxay noqon kartaa wax adiga kuu ah.
Waxaad mar walba ka bilaabi kartaa barnaamijka daryeelka-nafaqada. Waa inaad diyaar u tahay inaad daryeesho dadka haddii ay yihiin da 'yar ama duqoobay, rag ama dumar.
Feejignow! Waxa kale oo aad u baahan tahay mid ka mid ah takhasusyada aad si toos ah ula xiriirto cuntada shahaadada caafimaadka waxay muujiyeen inaad caafimaad ahaan u habboon tahay inaad ka shaqeyso cunto. Caddaynta jir-dhiska waxay ku habboon tahay daraasadahaaga intiisa kale (joogto ah) oo aad ka shaqeyneysid nafaqada. Dhakhtar ayaa magacaabay shahaadadan ka hor 1 Oktoobar sanad dugsiyeedka. Haddii aad dib u diiwaangeliso, shahaadadan waa in isla markiiba la siiyaa.
Kadib shahaadada 3e daryeelka waad heleysaa shahaadada waxbarashada dugsiga sare. Hase yeeshee, waad haysataa ma ahan diblooma waxbarasho sare. Sidaas awgeed waxaa lagula talinayaa inaad haysato mid 7e sannadka khaaska ah in la raaco. Kadibna waxay helaysaa Dibloomada waxbarashada dugsiga sare. halkanMacluumaad dheeraad ah ayaa laga heli karaa.
Waxaanu hadda ku jirnaa barnaamijka Tababarka Nafaqada ee Nafaqada. Laga bilaabo laga bilaabo sannad-dugsiyeedka 2019-2020, sanadka 6e ayaa lagu dari doonaa. Sannad-dugsiyeedka ka dib waxaan bixinaa sannadka khaaska ah ee 7e. Waxaad hadda diiwaan gelin kartaa sanadka 5e.
Xaggee baad ka helaysaa casharrada?
Barashada dabaqa shaqada
Baro + Faahfaahin si faahfaahsan
Tixraac halkan miisaska casharrada ee Daryeelka Nafaqada ee BSO:
Sannadka 3e ee kooban (37KB, .pdf) (ugu dhakhsaha badan online)
Sannadka 4e ee kooban (37KB, .pdf) (ugu dhakhsaha badan online)
Sannadka 5e ee kooban (36KB, .pdf)
Waxaad cashar ka heleysaa Ruggeveld campus Deurne.
Waxaad nala soo xiriiri kartaa taraamka 10 - taraam 5 - taraam 8 - baska 19 - baska 410 - baska 411 - baska 412
Ka eeg Khariidadaha Google
Laga soo bilaabo shahaadada 3 Layli qayb muhiim ah oo ka mid ah tababarka, laakiin sidoo kale horeba ardayda waxay horeba ula xiriiraan dabaqa dukaanka iyo dunida ganacsiga.
Maamulayaasha iyo shaqaalaheennu waxay leeyihiin shaqo sannado badan oo khibrad ah oo aan ku hagaajineyno ardaydeena goobta shaqada. Goob kasta oo waxbarasho ah waxaan leenahay shabakad balaadhan oo shirkado ah oo loola shaqeyn karo.
Waxaa sidoo kale jira socod Wadashaqeyn badan oo la leh qaybaha, shirkadaha aan ka shaqeyno mashruuc-ku saleysan, sida VDAB, Agoria, Umicore, Atlas Copco, iwm.
Nidaamkani wuxuu bixiyaa lacag. 7 oo ku saabsan kuwa loo shaqeeyayaasha 10 waxay shaqaalaysiin doonaan qof si dhakhso ah haddii ay ku yeesheen qaab waxbarasho ee goobta shaqada inta lagu jiro tababarkooda, sida lagu sheegay daraasadda UNIZO. "Barashada goobta shaqada waa inay noqotaa mid iskeed isku caddeysa dhammaan koorsooyinka tababarka, waana inay si toos ah ula jaan qaadaan baahiyaha shirkadaha laftooda," ayuu yiri agaasimihii hore ee UNIZO Karel Van Eetvelt.
Haddii aad doorato Waxbarashada + Xirfadaha, waxaad raacdaa mid tababar buuxa ee BSO ama heerka TSO. Tani waxay suurtogal ka tahay heerka koowaad. Adiga ayaa dooranaya gudaha Nijverheid, STEM ama Sport. Waxaad heleysaa aqoon aasaasi ah. Intaa waxaa dheer, waxaad tahay xirfadle xirfadle. Waxaad heleysaa tababarka dhabta ah by our macalimiin khibrad u leh. Barashada dabaqa shaqada ayaa ah qayb muhiim ah oo ka mid ah barnaamijyadayada waxbarasho ee buuxa ee Waxbarashada + Xirfadaha. Via layliyo, barashada goobta shaqada iyo iskaashiga dhinacyada iyo shirkadaha adiga ayaa lagu hagaajin doonaa mid meel fiican ee suuqa shaqada. Waxaan sidoo kale bixinnaa tababaro gudaha ah dual Learning.
Haddii aad ka gudubto mid ka mid ah barnaamijyada shahaadada, waxaad ku guuleysan doontaa Dibloomada waxbarashada dugsiga sare. Sidoo kale shahaado maareynta ganacsiga waa suurtagal. The Koorsooyinka BSO u diyaarso suuqa shaqada. Waxaad ku takhasustay boodka aad dooratay ee sanadka takhasuska 7. The Waxbarashada TSO ku siinayaa aasaas adag daraasad sare ka bilow gudaha beertaada.
Waxaan kuu soo bandhignaa mid jidka loo maro halkaa hagid shakhsiyeed iyo mid jawiga kulul dhexe. Soodhiyeyaasheena dugsiyadu waxay ku deeqaan fursado balaadhan oo macquul ah.
Su'aal gaar ah oo ku saabsan waxbarashadan?
Agaasime Ku-xigeenka Waxbarashada + Xirfadaha